CUNTADA IYO QAADASHADA MAALIN KASTA EE BAKAYLAHA GURIGA - XOOLAHA
Cunto quudinta guriga: waxa la siin karaa iyo inta ay le'eg tahay
Kicinta bakaylaha waa waxqabadka caadiga ah ee beeraha. Wuxuu iyaga u keenay beeraha yar yar iyo beeraha waaweyn ee bakayle. Waxqabadka wax soo saarka ah ayaa gaadhay qiimaha ugu sarreeya, xayawaanka raba in ay hubiyaan cuntada saxda ah.
Cunto qaadashada bakaylaha guriga
Marka ay timaaddo cunnida, waxaa jira laba qaybood oo waaweyn:
farqiga u dhexeeya xagaaga iyo jiilaalka ee geedaha yaryar;
kala duwanaanshaha nafaqada ee bakaylaha, bakaylaha dadka waaweyn, haweenka uurka leh iyo bakaylaha nuujinta.
Miisaanka culus ee xayawaanka ayaa sidoo kale saameyn doona xaddiga cuntada. Sidaa daraadeed, si aad u fahamto sharciyada, waxaa fiican inaad diirada saarto boqolkiiba, oo ma aha garaam. Waxaa fiican in la bilaabo dabeecadda cuntooyinka leh qaababka cuntada ee bakaylaha duurjoogta.
Akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan waxa laga yaabo inay tahay in aan la siin karin bakaylaha.
Sababtoo ah koritaanka joogtada ah ee ilkaha, xayawaanka daruuriga ah wuxuu u baahan yahay laamaha, waayo ilkaha ilkaha. Xayawaanku wuxuu si gaar ah u eegayaa jilifka geedaha midhaha leh. Saldhigga nafaqada - cawska, caleenta, waxaa laga helay xididada. Celceliska miisaanka qofka duurjoogta ah waa qiyaastii 2 kg. Hilibka hilibka hilibku wuxuu miisaankiisu noqon karaa 7 kg, sidaas darteed cuntada waa in ay ahaataa mid tayo sare leh.
Isbedelka cuntada ayaa dhacda marka lagu daro:
dalagga xididka ah ee aan laga helin duurjoogta;
cowska cagaaran ee gaarka ah (alfalfa, dhirta iyo kuwa kale).
Saamaynta noocyada cuntada ee cuntada:
Nooca Cunnada La qaybso cuntada,%
quudiyo oo diirada saaro 36
khudaarta cagaaran 9,5
Xilliga jiilaalka, cagaarka cagaaran waxaa lagu beddelay qoyaan iyo quudin, oo ay ku jiraan silage, bocorka quudinta iyo xididdada, qashinka, qashinka. Nidaamka awoodda waa saddex jeer, iyadoon loo eegin xilliga xiga. Sidoo kale cuntadu waa inay noqotaa cusbo miiska iyo cuntada lafaha sida ilaha minerals (ilaa 12 g maalintii).
Qodobka ugu muhiimsan ee fitamiinada fitamiinadu waxay helayaan cunto. Haddii uu jiro indho qalalan, sanka oo duufan, aan rabin inuu tago xiirid, tani waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa la'aanta fitamiino. Faytamiin C wuxuu ka yimaadaa cagaar cagaaran, fitamiin B wuxuu ka yimaadaa qamadiga iyo lowska, karootada waa ili vitamin A.
Waa muhiim! Grass on hay aan la qalajin karin qorraxda tooska ah, sababtoo ah Qorraxdu way baabi'isaa fiitamiinada, taas oo yareyneysa tayada faa'iidada leh.
Qalab fitamiin oo dheeraad ah ayaa la siin karaa xayawaanka rabaayadda ah, iyaga oo ku daraya cunto qoyan.
Saldhigga cuntada xagaaga - cagaarka. Si aad u hesho cawska ugu nafaqo badan, waxaa lagula talinayaa in lagu beero digirta, beerato alfalfa, dhir, lupin, galley, miro, dalagyada xilliga qaboobaha. Bacriminta ayaa gaar ahaan faa'iido leh fitamiinada iyo borotiinada asalka dhirta.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido wixii dheeri ah iyo fiitamiinada la siinayo bakaylaha.
Harvesting hay waxay ka fiican tahay cawska ka hor ubax, sababtoo ah waxaa ku jira xaddiga ugu badan ee nafaqooyinka iyo waxay noqon doontaa faa'iido badan. Khamriga naftooda way ogyihiin faa'iidada cawska, sidaas darteed waxay doonayaan in ay cunaan cawska oo la goosto bisha Agoosto - Oktoobar.
for bakaylaha dadka waaweyn ee nasasho - 600-800 g;
naas nuujinta - illaa 900 g;
naas nuujinta - ilaa 1500
Waa in ay jirtaa cufur badan si ay bakayle u cunaan inta uu jidhku u baahan yahay. Cagaarka cagaaran (silage) ayaa sidoo kale lagama maarmaan u ah cuntooyinka xagaaga, waana inay noqotaa qiyaastii 300 g oo ah bakaylaha dadka waaweyn, marka laga reebo bakaylaha naas nuujinta, heerka uu korayo 30%. Sidoo kale raashinka maalinlaha ah waa inay ku jiraan waxyaalaha ku qoran miiska.
Nooca Cunnada Caadada cuntada, g
khudaarta cagaaran 450
kaabajka kaabash 300
iska jar 50
hilibka iyo cuntada lafaha 5
dheellitirka macdanta 2
Waa muhiim! Dhibaatooyinka leh koritaanka waa calaamad cad oo ah la'aanta fitamiinada kooxda B. Xaaladaha shaqada ee nidaamka muruqyada waa calaamad muujinaysa la'aanta fitamiin D. Waxa aad ka buuxin kartaa hoos u dhiganta caanaha, geedka la kariyey, iyo warshad warshadeed.
Dumarka uurka leh, qadarka badarka, hilibka iyo lafaha iyo macdanta ayaa labanlaabmay. Dumarka kalkaalisada (ilaa 18 maalmood da ', bakeyle) - labanlaabee cuntada oo idil.
Saldhigga cuntada jiilaalka - hay iyo xididada. Xilliga jiilaalka, 1 bakayle wuxuu u baahan yahay 300 g oo ah caws iyo 100 g oo laamood, quudin iyo nafaqo - ilaa 300 g. Cunto Cagaaran oo ah cuntada xilliga qaboobaha waxaa lagu bedelay silage, kaas oo la goostay inta lagu jiro xilliga cawska ba'an ee culus. Kaalmada maalinlaha ah - qiyaastii 200-300 g 1 xayawaan ah, bakaylaha bakteeriyada - ilaa 600 g.
Tartanka jiilaalka ee maalinlaha ah ee bakaylaha waxaa la siiyaa miiska.
quudinta succulent 200-300
khudaarta cagaaran 250-300
Video: sida loo quudiyo bakaylaha xilliga jiilaalka
Waa imisa xaddidaad si ay u bixiso maalin kasta iyo inta jeer ee loo baahan yahay in bakayle la quudiyo
Dabeecadda, bakaylaha waxay cunaan jadwalka, maaddaama ay yihiin geedisocodka, waxay haystaan ​​helitaan joogto ah oo cunto ah. Iyada oo la taaban karo moobiilka, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u siiso xayawaanka. Mudo 24 saacadood ah, bakayle wuxuu heystaa wakhti ay ku sameeyaan 30 wajood oo cunto ah. Waxaad ku dhajin kartaa cunto kafari 3 jeer maalintii (subaxa, qadada iyo fiidkii).
Baro sida loo bakhtiiyo dhibaatooyinka dheef-shiidka sida calool-fadhiga, shubanka iyo ka-go'a.
Noocyada qoyan ee qoyan waxaa lagu siiyaa hab sidaas u cunnidu ma joogsato xayndaabka muddo ka badan 2 saacadood. Gawaarida subaxda ee cuntada waxay ka kooban tahay noocyada qalalan ee cuntada, iyo dalagyada xididada waxaa la doorbidayaa galabtii. Habeenkii, bakaylaha waxaa la siiyaa cunto qalalan, hay, bacalka. Khamrigu waa xayawaan furan, sidaa darteed waqtiga madow ee maalintii ma aha caqabad cunto.
Nasasho, dadka waaweyn waxay ku quudiyaan habka caadiga ah (heerka isticmaalka ugu yar):
Nooca Cunnada Xilliga jiilaalka Xilliga xagaaga
quudinta, diirada, badarka 160-200 100-150
laamaha 100 100
quudinta succulent 300 -
khudradda xididka, kaabajka, khudaarta kale 150-200 100-150
cagaarka - 600
Ka hor inta aan la maareyn, mugga quudinta ayaa kordhay 20%. Tayada cuntadu waxay kuxirantahay waxqabadka galmada ee ragga iyo dumarka. Intaa waxaa dheer, xayawaanka si fiican u daaqaya waxay soo saaraan farir wanaagsan. Cunto qaadaha bakeylka ayaa la kordhiyay 50-60%, sababtoo ah inta lagu jiro muddadan waxay u baahan tahay nafaqooyin badan.
quudinta, diirada, badarka 320 240
laamaha 160 160
quudinta succulent 480 -
khudaarta xididka, kaabajka 320 240
cagaarka - 960
Naasnuujiyuhu waa inuu helaa xayawaanka aan xadidnayn. Cunto qudaarta waa inay ka kooban tahay 3 nooc oo khudaar kala duwan ah. Wadarta guud ee feedka marka la barbardhigo qiyaasta caadiga ah ayaa kordhay 2 jeer.
Ma taqaanaa? Dhererka ugu weyn ee dhegaha ee bakaylaha waa 80 sentimitir.
Cuntada carruurnimada ilmuhu waxay leedahay tiro fara badan:
bakteeriyada canugga dhashay iyo ilmaha yar ilaa 1-1.5 bilood jir ayaa lagu quudin karaa bakayle;
Noocyada cusub ayaa si tartiib tartiib ah loogu daraa dhalinyarada cuntada ku jirta da'da 20 maalmood.
Cunnooyinka hilibka doofaareedka, waxa la doorbidi karaa in lagu daro diirriga siinta raashinka (30 g for bakaylaha bil kasta iyo ilaa 90 g 2 bilood). Hay waxaa lagu siin karaa 2 bilood oo aan ka badnayn 1 xirmo maalintii. Laga bilaabo da'da hal bil, cunugga bakaylaha waxaa la siin karaa karootada cayayaanka ah oo la jarjaray iyo khudrado kale oo xidid.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad ka akhrido sida loo quudiyo bakeylka xannaaneynta ka dib wareega wareegga, iyo sidoo kale inuu barto waxa iyo sida loo quudiyo bakayle aan lahayn bakayle.
Qaababka quudinta bakaylaha leh hadhuudhka sida waafaqsan nidaamka Zolotukhin
Nidaamka Zolotukhin wuxuu ka kooban yahay xayawaanka xoolaha gebi ahaanba loo wareejiyo raashinka.
Faa'iidooyinka nafaqada noocan ahi waxay tixgeliyaan:
Qiimaha tamarta sare ee hadhuudhka marka loo eego cawska iyo cagaarka;
maadooyinka sare ee karbohidraatka, macdanta iyo fitamiinada.
Nasasho, bakaylaha waxaa lagu quudin jiray miro qallalan oo dhan, kuwaas oo si joogto ah ku jira feeder. Ka hor inta laysku daro iyo okolom - garee jarjaran. Khamriga cawska oo cufan, ragga waxaa lagu daraa isku darka taranta ee hadhuudhka. Beddelidda farsamada ayaa qallajinaysa hadhuudhka iyo quudinta miraha la kariyey.
Maxaa aan cuni karin
Iyadoo tixgelinaysa in bakaylaha ay yihiin geedaha geedaha, waa in aan lagu siin wax alaab ah oo ka mid ah cuntada dadka:
rootiga iyo alaabada la dubo;
Sida caadiga ah laguma talinayo in la siiyo baradhada. Rootka laftiisa wuxuu u keeni karaa shuban tiro badan, iyo dusha baradho waxaa ku jira sunta qudaarta, solanine, taas oo ah sunta xayawaanka.
Ma taqaanaa? Khamrigu wuxuu sameyn karaa 120 daqiiqo dhaqdhaqaaqa daqiiqad kasta.
Biyuhu waa lagama maarmaanka u ah jirka si loo helo isku dheelitir, sidaas darteed waxay cabbaan badan bakaylaha. Waxa kale oo lala xidhiidhiyaa dheef-shiid kiimikaad sarreeya. Xilliga kuleylka, waxay helayaan dareerayaal leh geedo cusub. Qiyaasta biyaha ee nasashada maalin walba waa 0.5 - 1 l maalin kasta, dumarka kalkaaliyeyaasha ayaa tiradooda ah 2 litir. Digniinta waa in sidoo kale la siiyaa tayada biyaha. Biyaha ka soo qulqulaya dabiiciga ah ee loogu talagalay waraabinta ma'aha mid ku haboon sababtoo ah joogitaanka suurtogalka ah ee jirooyinka. Xaaladda isku xirnaanta cabitaanada nidaamka biyaha, xayawaanku waxay diidi karaan in ay cabbaan biyaha koloriinta, maaddaama ay aad u nugul yihiin budada dufcadda, sidaas darteed, biyaha la cabo ama biyo diirran ee heerkulka qolka ayaa ka doorbida cabitaanka.
Waxaan ku talineynaa in aan wax ka akhrino sida loo maareeyo bakaylaha xilliga qaboobaha, waxa biyaha ku jira, iyo sidoo kale baro sida loo sameeyo baqshiimiin loogu talagalay baruurta si aad gacmahaaga u gaarsiiso.
Biya dhoobo iyadoo la raacayo sifooyinka dabiiciga ah waxaa loo tixgeliyaa inay ka sarreyso tayada caadiga ah sababtoo ah isbeddelada ka yimaada qaab dhismeedka kalluunka ka dib marka dareeruhu ka boodo hal xaalad oo ka mid ah isu geynta.
Biyaha noocan oo kale ah ayaa la siin karaa bakaylaha sidoo kale waxay kululaan heerkulka qolka. Oo waxay u baahan tahay in la dhalaaliyo baraf cad ama baraf. Muhiim ah waa naqshadeynta iyo poilnikov. Sidaa daraadeed, xariggu waa inuu ahaado dherer 10 cm oo dhulka ka soo baxa si aan biyuhu u faddaroobin.
Haddii la isticmaalo naadiyaha naaska, markaas wakhti ahaan waa lagama maarmaan in la hubiyo tayada shaqadooda, taniyo Goolka isbaarada ah ee soo noqnoqda ayaa ku dhejin kara. Cuntada xayawaanku way ku kala duwanaan kartaa beeraha kala duwan.
Video: waxa la cabbo bakaylaha Si aad u dooratid ikhtiyaarka ugu fiican, xakamee falcelinta xayawaanka guryaha cusub. Khamrigu waa xayawaan jilicsan, dabeecaddooduna waxay u adeegi karaan calaamadaha saxda ah ee ficilada beeralayda, si ay si fiican ugu caawiyaan inaad sameysid cuntadaada.